နာမည်ကြီး Meme ဇာတ်ကောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ - ONE DAILY MEDIA
အင်တာနက်ဟာ သာမန်လူတစ်ဦးကို ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ကလစ်တစ်ချက်မျှဖြင့် နေ့ချင်းညချင်း တစ်ဟုန်ထိုးကျော်ကြားလာစေနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်မုန်တိုင်း တစ်ကြိမ်မျှ ဖြင့်တစ်ဟုန်ထိုး ပြောင်းလဲသွားခြင်းအချို့ကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
(၂၀၀၇) ခုနှစ်က မိခင်ဖြစ်သူ တင်လိုက်သော အသက် (၁၁) လသားအရွယ် Sammy Griner ၏ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံဟာ လူအများကြားရေပန်းစားခဲ့ရပါတယ်။
မရည်ရွယ်ပဲတင်လိုက်မိတဲ့ အဆိုပါဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံကြောင့် သူတို့မိသားစုဟာ ဝင်ငွေအများအပြားရရှိခဲ့ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ Griner ၏ အသက်ကိုပါ ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသပြီး ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဖခင်ဖြစ်သူ Dave ၏ (၂၀၀၄) ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့သောပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သရုပ်ပြလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်နေကြစဉ် ရိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လူမှုကွန်ယက်များမှာ အလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ရက်ပ်ဂီတ အဖွဲ့ Beantown Mafia မှ ၂၀၁၁ မှာထွက်ရှိတဲ့ အယ်လ်ဘမ်အတွက် ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုံကတော့ Blake Boston ဟုခေါ်သောလူငယ်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဆိုပါဓာတ်ပုံဟာ မိခင်ဖြစ်သူ ရိုက်ကူးပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
4.Bad Luck Brian
(၂၀၁၂) ခုနှစ်က ကောလိပ်ကျောင်းသား Kyle Craven ၏အတန်းဖော် တင်ထားခဲ့သော အဆိုပါဓာတ်ပုံဟာ ‌နာမည်ကြီး Meme တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့၏ ဆရာများက အဆိုပါ ရယ်စရာဟာသ မျက်နှာကိုတမင်တကာ ပြုလုပ်သည် ဟုထင်‌နေကြသောကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Kyleကပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Chloe ဟုခေါ်သော မိန်းကလေးငယ်သည် သူမ၏ မိဘများ (၂၀၁၃) ခုနှစ်က YouTubeမှာ တင်လိုက်သော video ကြောင့် နာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီး ထို video ထဲတွင် သူမ၏အစ်မ Lily သည် Disneyland သို့သွားရခြင်းကိုအလွန်ပျော်ရွှင်နေချိန် သူမကတော့ စတင်ငိုကြွေးပါတော့တယ်။Chloe က အံ့သြသောအမူအရာဖြင့် စတင်တုံ့ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် Laina Walker ၏ YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုဟာ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများကြား အာရုံစိုက်မှုများစွာကိုရရှိခဲ့ပြီး ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ နာမည်ကြီးအဆိုတော်ပြိုင်ပွဲရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Justin Beiber ရဲ့သီချင်း “Boyfriend” ကို cover version သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ meme ကတော့ သူမဟာ စာအုပ်တွေကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးပုံပေါ်နေပြီး အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆန်နေတဲ့အမူအရာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။သူမကို လူသိများစေသောအချက်ကတော့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများက သူမမျက်နှာ အနေအထားအရ သူမစကားပြောရန်ပြဿနာရှိနေမည်ကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး Ermahgerd (“Oh my God”) meme ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ ။
ဒီ meme ပုံရဲ့ စတားကတော့ Maggie Goldenberger ဖြစ်ကာ သူမဟာ ယခုအခါ ကြီးပြင်းလာပြီဖြစ်ပြီး သူနာပြုဆရာမအဖြစ်အလုပ် လုပ်ကိုင်‌ပါတယ်။
8. Outraged girl
ကလေး သရုပ်ဆောင် Mia Talerico ဟာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက အင်တာနက် meme တစ်ခု၏ ကြယ်ပွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့မျက်နှာပုံကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တုန်းကပ ထမဆုံးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Good Luck Charlie တီဗီရှိုးကနေ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
9. Dissatisfied McKayla
၂၀၁၂ လန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ကိုယ်ကာယအလှမယ် McKayla Maroney ဟာ ရွှေရနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သော်လည်း ဒုတိယသာ ရခဲ့တယ်။
သူမဟာ အလွန်စိတ်ပျက်နေခဲ့ပုံကို ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားအတွင်းမှာပင် ဟန်မဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ရာသီဥတု ပြောင်းလဲလာမှုတို့၏ သက်သေဓာတ်ပုံများ